छुटीन गार्हो छ - Ddus Gajurel Blogs
छुटीन गार्हो छ
on Sunday, December 16, 2012 in अनुभब
कती सजिलै भनिस है, हामी छुटीम भनेर ? म स्तब्द भए, म संग बोल्ने कुनै शब्द नै भएन । उ रुदै भन्दै थिई, मैले उसलाइ बस्ता गरीन रे ? म धेरै निस्टुरी भए रे ? म सुन्दै थिए, तर म उ संग बिताएका ति पलहरु संम्झदै थिए । प्हिलो भेट, दोस्रो डेट, अनि क्रमश अन्य भेटहरु.....
हो म संग समय हुन्थेन, तर माया त गरेकै थिए नी, खै बुझेको मेरो माया ?
माया भन्ने बितिकै जतिबेला पनि फोनमा झुन्डी रहने, घुम्न हिडी हाल्ने .... आदी कुरा हैन , माया त मनबाट हुन्छ जुन स्वच्छ हुन्छ निर्मल हुन्छ,
खै त कुरा बुझेको ???